125KHz EM4102 Mgbawa ID Card Reader, 125KHz TK4100 Mgbawa ID Card Reader, EM4102 Mgbawa Idi nso ID Card Reader, EM4102 Mgbawa Idi nso ID Card Access Control Reader, 125KHz EM4102 Mgbawa ID Card RS232 Port Reader, 125KHz EM4102 Mgbawa ID Card USB Port Reader
125KHz EM4102 Mgbawa ID Card Reader
LF / HF Reader 125KHz EM4102 Mgbawa ID Card Reader, 125KHz EM4102 Mgbawa ID Card RS232 Port Reader, 125KHz EM4102 Mgbawa ID Card USB Port Reader, 125KHz TK4100 Mgbawa ID Card Reader, EM4102 Mgbawa Idi nso ID Card Access Control Reader
The kasị ala na-eri Low Frequency 125KHz EM4102 mgbawa kaadị agụ.
model: YJ30 usoro
operating ugboro: 125kHz
Ofụri Esịt akwado: uem4100 dakọtara format ID kaadị (64 ibe n'ibe, Manchester koodu)
Gụọ kaadị Type: EM4100, TK4100, EM4001, TK4101, EM4102 ma ọ bụ dakọtara mgbawa
ọrụ mode: Ọgụgụ naanị
itinye n'ọkwa anya: 1~ 10cm
Communication ọsọ: 106Kbit / s
Serial baud ọnụego: 9600Kbit / s
Gụọ Oge: <100MS
Power: DC 5V(± 5%)
ọrụ ugbu a: <100ma
interface: RS232 / USB
Mgbasawanye na m / O interface: dịghị
Status ngosi: 2-agba ikanam egosi, ike red, agụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
operating okpomọkụ: -10℃ ~ + 70 ℃
nchekwa okpomọkụ: -20℃ ~ + 80 ℃
ikwu iru mmiri: 0~ 95%
size: 110× 80 × 26mm ma ọ bụ 105 × 70 × 12mm
125KHz EM4102 Mgbawa ID Card Reader mejuputa kaadị Oghere Usoro ọgụgụ na-ebute site ná ndị na kọmputa site na USB / RS232 ọdụ ụgbọ mmiri na ọrụ na-eji ibu ọkwọ, nwere ike, fanye kaadị igwe kọmputa USB interface, kaadị na-egosi a-acha uhie uhie ìhè na green ìhè flash, ruo mgbe ị na-anụ ome uzu kụrụ abụọ ọkụ na-egosi na mgbe red ìhè, nwere ike na-amalite a kaadị, kaadị mgbe nọmba kaadị a na-egosipụta na ọnọdụ nke cursor. Jiri management software jikwaa nọmba kaadị, mepụta ọtụtụ ọrụ. Nke a kaadị-agụ nwere ike na-agụ, ike dee.
Ọ bụrụ na-eji maka ohere akara agụ, nọmba kaadị format nwere ike ịnara 8H10D, 6H10D, 6H8D, 2H3D4H5D, 8H, 6H, 4H5D4H5D, nhọrọ nkasi-eduga efù, na tinye isi, nwekwara ike-ahaziri, ndabere format 8H10D, na tinye isi.
Ihe kwesịrị imekwu nke ọma
E nwere a mgba ọkụ na ala nke na kaadị agụ(kpọmkwem), i nwere ike ịgbanwe mmepụta 8 digits nọmba.
Kaadị agụ arụnyere na ọnọdụ nke ga-adaba adaba na ime, zere nso monitor, n'ihi na ileba anya radieshon nwere ike igbochi ya na nkịtị na-arụ ọrụ nke kaadị agụ.
Zere nso a nnukwu ebe metal akpọkwa, ma ga-ebelata kaadị agụ anya, ọbụna na-adịghị na-agụ kaadị.
Kaadị agụ na kọmputa nkwurịta okwu n'etiti ndị cable ogologo kwesịrị erughị 15 mita.
Ọ bụrụ na e nweghị ndị na-agụ: na interface na-plugged na; Ma ọ bụ dakọtara na RFID kaadị; RF kaadị ọjọọ ; ma ọ bụrụ na ọzọ RF kaadị agụ na mpaghara dị nso.
Nyefee data njehie: ma ọ bụ ike akpa nnyonye anya na gburugburu ebe obibi; nkwurịta okwu cable n'etiti onye na-agụ na na kọmputa bụ kwa ogologo.
M m mmasị gị ngwaahịa 125KHz EM4102 Mgbawa ID Card Reader
Na Mbụ: Mifare IC Card Sector Data Block zònye ederede Reader
Osote: EM Kaadị / IC Card Dual Frequency Reader, 125KHz / 13.56MHz Dual Band Reader
ACR122U-A9 NFC Reader, Felica, Mifare support,SDK Pack,ISO 14443A / B
125kHz, 134.2kHz, 13.56MHz Handheld Bluetooth USB n'ọdụ ụgbọ mmiri Gụọ Dee Device Adabara gam akporo